मोडल गहना वशिष्टले गरिन फेरी अर्को तमासा « Etajakhabar
मोडल गहना वशिष्टले गरिन फेरी अर्को तमासा
मुम्बई । पो’र्नोग्रा’फी गरेको अभियोगमा व्यापारी राज कुन्द्रा गिरफ्तारीमा परेपछि बलिउडमा यसकोको चर्चा फेरि बढेको छ । सोही प्रसंगमा जोडिन आएकी छिन् मोडल गहना वशिष्ट । गहनालो एउटा न्यु’ड फोटो सुट गराएकी छिन् । जुन फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्यो । कतिले यो फोटो पनि राज कुन्द्राले नै गराएको टिप्पणी गरे ।
तर, गहना न्यु’ड फोटो कसैको करकापमा नभएर आफ्नै रहरमा गरेको बताउछिन् । ‘यो फोटो फुट मैले आफ्नै मर्जीले गराएको हुँ । फोटो सुट गर्दा म पुरै होसमा थिए । एक गिलासँ जुस पनि पिएकी छैन । न त कुनै ड्र’ग्स लिएकी छु । न त मरो यौ’ ‘न शो’ष’ण भयो ।’
फोटोसुट वारे थप प्रष्ट पार्दै उनी भन्छिन् ‘यो फोटो हायात रिजेन्सीमा गरिएको थियो । फोटो सुट गर्दा २० जना भन्दा बढीको टिम थियो । म अटोमा गएको थिएँ र अटोमै फर्किएको थिएँ ।’ आफु एउटा सामान्य कलाकार भएको भन्दै फोटो सुट वापतको पारिश्रमिक पनि पाएको बताइन् ।
त्यस्तै केहि दिन अगाडी गहनाले यो दाबीलाई सत्य सावित गर्नका लागि सबै सिमा पार गरेकी छिन् । उनी, सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा लाइभ आएकी थिईन । तर, आफूले लाइभ गर्दा कुनै पनि पहिरन नलगाएको गहनाले उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले भिडियोमा भनेकी छिन्–‘साथीहरु म तपाइहरुको अगाडि लाइभमा छु । मलाई भन्नुहोस् त, के म भ’ल्ग’र देखिएकी छु । के यसमा कुनै त्यस्तो कुरा छ, जसलेगर्दा तपाइहरुलाई पो’ ‘र्न बिषय देखिन्छ ? के म लाइभमा बस्दा तपाइहरुले यसलाई पो’ ‘र्न बिषय भन्न सक्नु हुन्छ ? तर, मेरो विश्वास गर्नुहोस् कि मैले केही पनि लगाएकी छैन ।’
लाइभमा गहनाले भनेकी छिन्–‘मैले कपडा लगाएका जुन मेरो भिडियो छन्, मानिसहरु त्यसलाई पो’ ‘र्न भनिरहेका छन् । तर, मैले आज कपडा लगाएकी छैन । मैले कपडा लगाएर गरेका बाँकी भिडियोहरुलाई हेरेर मानिसहरु पो’ ‘र्न सुट भनिरहेका छन् । पाखण्डीको पनि हद हुन्छ नी ।’